စိတ်ဝင်စားစရာ မာမာရဲ့ ဝါသနာများ: November 2014
ထမင်းပေါ်သို့ နှစ်သက်သလို အသီးအရွက်
ကော်ရည်ကို ဆမ်းပြီး ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်
အသားမပါပေမဲ့ အရသာကောင်းမွန်လွန်းတဲ့ သတ်သတ်လွတ် သီးစုံထမင်းပေါင်းလေး လုပ်စားဖြစ်ပါတယ် အိမ်ရှင်မရဲ့ တနေ့တာ ဘာချက်ရမလဲ ဘာလေးလုပ်ပေးရင် သူတို့တွေ စားလို့မိန်ကြမလဲဆိုတာကို အိပ်ယာကနိုးတာနဲ့ အလိုလိုကို ခေါင်းထဲဝင်လာပြီးသားပါ။
ဒါကြောင့်မို့ ဒီနေ့တော့ အသားမစားတဲ့ ကလေးအတွက် သီးရွက်စုံ ထမင်းပေါင်းလေး လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ် ထမင်းပေါင်းရဲ့အခြေခံကတော့ အဓိက ကော်ရည်ပါဘဲ ကျန်တဲ့အသား အသီးအရွက်ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုထဲ့လို့ရပါတယ်။
ဆန် - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး နှစ်ဗူး
အခက်လေးများ ပိုင်းဖြတ်ထားသော ဘရော့ကိုလီ - ဆယ်ခက်ခန့်
အခက်လေးများ ပိုင်းဖြတ်ထားသော ပန်းဂေါ်ဖီ - ဆယ်ခက်ခန့်
ခပ်ထူထူ လှီးထားသော ဂေါ်ဖီ - တစ်စိတ်
ပန်းပွင့်ပုံစံ လှီးထားသော မုံလာဥနီ - အနေတော် တစ်ဥ
အနေတော် လှီးထားသော တရုတ်နံနံ - သုံးခက်ခန့်
ခပ်စောင်းစောင်း လှီးထားသော ဘေဘီပြောင်းဖူး - ဆယ်ဖူး
အဖတ်လေးများရအောင် လှီးထားသော ကြက်သွန်နီ - အနေတော် တစ်လုံး
ပဲငံပြာရည်အပျစ် - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲ
ပြောင်းဖူးမှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်း
ရေ. - ဟင်းပြင်ပန်းကန်အကြီး တစ်လုံးမရှိတရှိတို့ကို အားလုံးရောပြီး ဖျော်ထားပါ
ကော်ရည်များများ ကြိုက်ပါက ရေပိုထဲ့ပြီး ဖျော်ပေးပါ
ဆန်ကိုရေဆေးပြီး ထမင်းကျက်အောင် ချက်ထားပါ
အသီးအရွက် အားလုံးကို ရေစင်အောင်ဆေးကာ လှီးပေးပြီး ရေစစ်ထားပါ
အိုးအောက်ချေထူသောအိုးကို အပူပေးပါ အိုးပူလာပါက ဆီကိုအရင်ထဲ့ပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ကြက်သွန်ြဖူကို မွှေးလာတဲ့ထိ ကြော်လိုက်ပါ
ကြက်သွန်ဖြူ အနံ့လေး မွှေးလာတာနဲ့ တရုတ်နံနံမှလွဲပြီး အသီးအရွက်များကို အားလုံးထဲ့ကြော်လိုက်ပါ
နှစ်မိနစ်လောက် ကြော်ပြီးတာနဲ့ အရသာ စပ်ထားသော ကော်ရည်ကို လောင်းထဲ့ပါ
အရသာ မျှတအောင် အားလုံးကို မွှေပေးပြီး အရသာမြည်းပေးပြီး လိုသလို ပြင်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ပဲငံပြာရည် ထဲ့ပေးကာ မွှေပေးပြီး တရုတ်နံနံကို ထဲ့မွှေပေးပါ
ကော်ရည် အရမ်းပျစ်သွားပါက ရေထပ်ထဲ့ပြီး မွှေပေးနိုင်ပါတယ်
အသီးအရွက်များ အရမ်းနူးလွန်းရင် စားလို့မကောင်းတဲ့အတွက် ဟင်းချက်ချိန် ၃မိနစ်သာသာလောက်ဘဲ ချက်ပေးပြီး မီးပိတ်ပေးပါ။
ချက်ပြီးသား ထမင်းကို ပန်းကန်တချပ်မှာ ထဲ့ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ထမင်းပူပူပေါ်မှာ ချက်ပြီးကာစ ပူနေသော ကော်ရည်နှင့် အသီးအရွက်တို့ကို ဇွန်းမှုတ်နှင့် ခပ်ပေးပြီး ထမင်းပေါ်သို့ လောင်းချပေးပါ
သတ်သတ်လွတ် ထမင်းပေါင်း ပန်းကန်ပြင်ပြီးတာနဲ့ မိမိတို့ နှစ်သက်ရာ အချဉ် အစပ်တို့နှင့် တွဲဖက်ပြီး စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 9:45 pm 1 comment:
ဒီနေ့တော့ အုန်းထမင်းချက်နည်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ် အုန်းထမင်းကတော့ မာမာ့အကြိုက် အစာတခုပါ အမေ့အိမ်မှာ နေတုန်းက အုန်းထမင်းချက်ကြမယ်လို့ သတင်းလေး သဲ့သဲ့များကြားရင် မာမာတယောက် ကြက်သွန်နွာမယ် အုန်းနို့ညှစ်ပေးမယ် ငရုတ်သီးထောင်းပေးမယ်ဆိုပြီး မီးဖိုဆောင်မှာ ပျော်ပျော်ကြီး ကူလုပ်ပေးတတ်သူပါ။
အခုတော့ ကိုယ်ကိုတိုင် အိုးသူကြီးဖြစ်နေပြီမို့ စားချင်တာလေး ထချက်လိုက် စားလိုက်နဲ့ ဇိမ်ကျသလောက် ၀ိတ်တွေလဲ တက်လို့နေပါပြီ ဒါကြောင့်မို့ တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတဲ့အတိုင်း တော်ရုံလေးဘဲ စားကြဖို့ပြောရင်းနဲ့ မာမာပြင်ဆင်ပြီး ချက်ထားတဲ့ ချက်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
Basmati Rice - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး သုံးဗူး
ကြက်သွန်နီ - အလုံးခပ်သေးသေး ခွန်နှစ်လုံး
အုန်းနို့ - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး သုံးဗူး (ready made ဗူးကို သုံးထားပါတယ်)
ရေ - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး သုံးဗူး
ရိုးရိုးထမင်းချက်သလိုဘဲ ထမင်းပေါင်းအိုးထဲကို ဆန်ဆေးပြီး ထည့်ပေးပါ
ကြက်သွန်နီကို အခွံခွာပြီး ရေဆေးထားပါ
ဆား အုန်းနို့ ကြက်သွန်နီ ဆီ သကြားနှင့် ရေတို့ထည့်ပြီး ခလုတ်နှိပ်ကာ ချက်ပေးပါ
အပျော့ဆန်ဆိုရင်တော့ ရေကို လျှော့ထည့်ပေးပါ
ရိုးရိုးထမင်းချက်သလို ချက်တာမို့ ခလုတ်တက်ရင် အုန်းထမင်း ကျက်ပါပြီ
ကြက်သားဆီပြန် အမဲသားဆီပြန် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသားဟင်းများနဲ့ တွဲဖက်ပြီး စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
အုန်းနို့ကို ရယ်ဒီမိတ်လာသော ဗူးများကိုသုံးနိုင်သလို အုန်းသီးတစ်လုံးကို ခြစ်ပြီး အရည်ညှစ်ယူလို့လဲရပါတယ်။
Posted by Tuumar at 3:42 pm3comments:
ဒီနေ့တော့ မနေ့ကစားတဲ့ ဖရဲသီးအခွံလေးတွေကို ချဉ်ငံစပ် ချဉ်ရည်ဟင်းလေး ချက်လိုက်ပါတယ် ဒီဟင်းလေးက ထမင်းကိုမြိန်စေသလို အရည်သောက်ဆမ်းလေး လုပ်ပြီးသောက်လိုက်ရင်လဲ ချဉ်ငံစပ်လေးမို့ ခံတွင်းလိုက်စေတဲ့ ဟင်းရည်လေးပါ။
ဖရဲသီးခွံ ချဉ်ရည်ဟင်းကို မာမာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ၁၉နှစ်လောက်က ကရင်ပြည်နယ် ကော့ဘိန်းတိုက်နယ်ဆေးရုံမှာ နေခဲ့စဉ် အချိန်ကစပြီး စားဖူးခဲ့သလို မကြာမကြာလဲ ချက်ဖြစ်ပါတယ် ငပိရည်နဲ့တွဲပြီးတို့စားတဲ့ တို့စရာအဖြစ်လဲ ဖရဲသီးအခွံကို နှစ်သက်ခဲ့အတွက် ဒီနေ့တော့ ချဉ်ရည်ဟင်းချက်ည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင် အခွံခွာပြီး လက်နှစ်လုံးသာသာ အနေတော် လှီးထားသော ဖရဲသီးခွံ - ဟင်းပြင်ပန်းကန်အကြီး တစ်လုံးမောက်မောက်
အခွံခွာပြီး ခပ်ပါးပါး လှီးထားသော ခရမ်းချဉ်သီး - ခပ်ကြီးကြီး နှစ်လုံး
ညက်နေအောင် ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး နှစ်မွှာ
ညက်နေအောင် ထောင်းထားသော ကြက်သွန်နီ - အနေတော် တစ်ခြမ်း
မညက်တစ်ညက် ထုထားသော စပါးလင် - အနေတော် နှစ်ပင်
ခေါင်းဖြုတ်ပြီး ကြောမှ အမဲကြောင်း ထုတ်ထားသော ပုဇွန်ထုတ် - ငါးကောင်
ကြက်သားမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်ု တစ်ဇွန်း
ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်သာသာ
ဖရဲသီးအခွံ ဆီ ဆား ကြက်သားမှုန့် ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီ ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် ခရမ်းချဉ်သီးတို့ကို အိုးထဲသို့ထဲ့ကာ ခရမ်းချဉ်သီး ကျေအောင်နယ်ပေးပါ
ပုဇွန် စပါးလင်နှင့် ရေ အနည်းငယ်ထဲ့ပြီး လုံးချက်ချက်ပေးပါ
ရေဆူလာပြီဆိုတာနဲ့ ခပ်ဖွဖွမွှေပေးပြီး ရေ ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးစာ ထဲ့ပြီး ရေဆူအောင်ဆက်တည်ပေးပါ
အကြာကြီးရေဆူစရာမလိုပါ ရေဆူချိန်ကြာပါက ဖရဲသီးများ ကျေကုန်တတ်ပါတယ်
ရေဆူလာတာနဲ့ အရသာမြည်းပြီး လိုသလိုပြင်ကာ သံပုရာရည်ညှစ်ပြီး ဟင်းအိုးကို မီးပိတ်ပေးပါ
အရသာမွှေးမွှေးလေးနဲ့ ချဉ်ငံစပ် ဖရဲသီးသောက်ဆမ်း ချဉ်ရည်ဟင်းလေး ရပါပြီ။
ဟင်းချက်ရန် လိုအပ်သောပစ္စည်း တချို့
ချဉ်ငံစပ် ဖရဲသီးခွံ ချဉ်ရည်ဟင်းရပါပြီ
Posted by Tuumar at 3:43 pm6comments:
ဒီနေ့တော့ အပျင်းပြေ လမ်းသရဲမုန့်လေး လုပ်စားဖြစ်ကြပါတယ် အိုးသူကြီးက မုန့်လုပ်လိုက် စားမဲ့သူတွေက စားလိုက်နဲ့ သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်းမို့လို့ ဓါတ်ပုံတောင် အလုအယက် ရိုက်ရတဲ့ အဖြစ်လေးပါ။
စားလို့ကောင်းလွန်းလို့ စားချင်တဲ့အချိန် လုပ်စားနိူင်အောင် မာမာပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ (၁၀ ချပ်စာအတွက်)
ဆန်အစိမ်းမှုန့် - 1 cup
ရေ -3cups
ဆိုဒါ(baking soda) - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတစ်ပုံ
ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း လေးပုံတစ်ပုံ (ဆန်မှုန့်ထဲ ထည့်ဖျော်ရန်)
ပဲပြုပ် - မိမိနှစ်သက်သလောက်
မုန်လာဥနီ - အနေတော် တစ်ဥ
ဂေါ်ဖီ - အနေတော် တစ်ခြမ်း
ခရမ်းချဉ်သီး - အလုံးကြီးကြီး နှစ်လုံး
ငရုတ်သီးစိမ်း - မိမိနှစ်သက်သလောက်
မဆလာ - အနည်းငယ်
ဆား - အနည်းငယ် ( အသီးအရွက်ထဲထည့်ရန်)
ဇလုံခပ်ကြီးကြီး တစ်လုံးထဲမှာ ဆန်မှုန့် ရေ ဆိုဒါနှင့် ဆားတို့ကို ထည့်ပေးပြီး အရည်ပျော်အောင် ဖျော်ထားပေးပါ
ဆိုဒါမှုန့် မရှိလျှင် မုန့် နှစ်ရည်ကို အနည်းဆုံး ၅နာရီခန့် နှပ်ထားပေးပါ(မာမာကတော့ ဆိုဒါမကြိုက်တဲ့အတွက် မုန့်နှစ်ရည်ကို ကြိုစပ်ပြီး ဖောက်ထားပါတယ်)
ဆိုဒါထည့်ပြီး မုန့်နှစ်ရည်ကို ဖောက်ထားပါက မုန့်လုပ်ပါက မုန့်သားက ပိုပြီးကြွတ်လွယ်ပါတယ်
ကြက်သွန်မိတ်ကို ရေဆေးပြီး အနေတော် လှီးထားပါ
ခရမ်းချဉ်သီးကို ရေဆေးပြီး ခပ်ပါးပါး လှီးထားပါ
မုံလာဥနီကို အခွံခွာပြီး အမျှင်လေးများရအောင် ခြစ်ပေးထားပါ
ဂေါ်ဖီကို ရေဆေးပြီး မထူမပါးလေးတွေ လှီးပေးထားပါ
ဆီ ဆား မဆလာနှင့် ပဲပြုပ်တို့ကို ပြင်ထားပေးပါ
အာက်ချေမကပ်တဲ့ ဒယ်ပြားကို မီးဖိုပေါ်တင်ကာ အပူပေးပါ
ဒယ်ပြားပူလာတာနဲ့ မီးကို အလယ်လောက်ထိ လျှော့ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ဆီထမင်းစားဇွန်း တစ်ဝက်သာသာကို ဒယ်ပြားထဲ ထည့်ပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ အိုကိုကိုင်းမှကိုင်ပြီး ဆီကိုဖြန့်ပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ မုန့် ရည်ကို ယောက်ချိုဇွန်းနှင့် သမအောင် မွှေပေးပါ
အထက်အောက် သမသွားတာနဲ့ မုန့်နှစ်ကို ယောက်ချိုဇွန်း အပြည့်ခပ်ပေးပါ
ခပ်ပြီးတာနဲ့ ဒယ်ပြားထဲကို လောင်းချပြီး ဒယ်အိုးလက်ကိုင်ကိုင်းမှကိုင်ကာ မုန့်နှစ်များ အိုးအပြည့် ပြန့်သွားအောင်ဝေ့ဝိုက်ပြီး ဖြန့်ပေးပါ
မုန့်နှစ်များ ဒယ်အိုးအပြည့် ပြန့်သွားတာနဲ့ မုန့်နှစ်အပေါ်ကို ဆီနည်းနည်း သုတ်ပေးပြါ
ပြီးတာနဲ့ အဆင်သင့် ပြင်ထားသော မုံလာဥနီ ဂေါ်ဖီ ပဲပြုတ် ခရမ်းချဉ်သီး နံနံပင် နှင့် ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ ကို ထည့်ပေးပါ
အသီးအရွက်များ အပေါ်မှ ဆားအနည်းငယ်နှင့် မဆလာ အနည်းငယ်ကို ဖြူးပေးပြီး အိုးအဖုံးကို မိနစ်ဝက်လောက် အုပ်ပေးထားပါ
မုန့်လုပ်နေစဉ် မီးကိုသတိထားပါ မီးအရမ်းများပါက အောက်ဖက်ပိုင်း ကျွမ်းလွယ်ပါတယ်
မုန့်သားများ ကျွတ်လာမှ အသီးအရွက်များကို အုပ်မိအောင် ခေါက်တင်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ပန်းကန်ပြားထဲ ပြောင်းပြီးထည့်ပေးပါ
အထက်ပါ နည်းအတိုင်း မုန့်နှစ်ရည် ကုန်တဲ့အထိ လုပ်ပေးပါ
မုန့်တစ်ခု ထပ်လုပ်တိုင်း ဒယ်အိုးကို ဆီမထည့်ခင် ဒယ်အိုးသန့်သွားအောင် paper towelနှင့် သုတ်သုတ်ပေးပါ
ရေမုန့် လို့ခေါ်တဲ့ လမ်းသရဲမုန့် ပူပူကြွတ်တ်ကြွတ် စပ်စပ်မွှေးမွှေးလေးကို စားသုံးရန် ပြင်ပေးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 2:47 pm6comments:
မနေ့က ကြော်ထားတဲ့ ငါးဖယ်ငါးဆုတ်ကြော်လေးကို ဒီနေ့တော့ ထမင်းပူပူလေးနဲ့စားရအောင် ရှူးရှဲအသုပ်လေး သုပ်စားကြပါတယ် ရေနွေးကြမ်းပူပူလေး မှုတ်ပြီးသောက်လိုက် အသုပ်ချဉ်ငံစပ်လေးစားလိုက် ထမင်းပူပူလေးလွေးလိုက်နဲ့ အကုန်အကျ သက်သက်သာသာနဲ့ ထမင်းတစ်နပ်ကို စိတ်ကျေနပ်စွာနဲ့ ပြီးစေခဲ့ပါတယ်။
ငါးဖယ်ငါးဆုတ် အတုကြော်နည်းလေးကတော့ မနေ့က ရေးခဲ့ပြီးပြီမို့လို့ ဒီနေ့တော့ စားမြိန်ဖွယ်ရာ ငါးဖယ်အသုပ် သုပ်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ပဲအကျက်မှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း
ငရုတ်သီး အလှော်မှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းသာသာ
အရသာမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်သာသာ
ငရုတ်သီးစိမ်း - ခွန်နှစ်တောင့်ခန့်
ကြက်သွန်နီဆီချက် - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲ
ကြော်ပြီးသား ငါးဖယ်ကို ကပ်ကျေးနဲ့ ခပ်ပါးပါးလေးတွေ ညှပ်ထားပါ
မုံလာဥနီကို အခွံခွာပြီး ရေဆေးကာ ခြစ်နှင့် ခြစ်ထားပါ
ဂေါ်ဖီကို ရေဆေးပြီး ခပ်ပါးပါး လှီးထားပါ
ပဲမှုန့် ငါးငံပြာရည် ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့် ကြက်သွန်နီ ဆီချက်နှင့် အရသာမှုန့်တို့ကို ပြင်ထားပါ
ဇလုံတစ်လုံးထဲမှာ ခပ်ပါးပါး ညှပ်ထားသော ငါးဖယ် ကြက်သွန်နီ ငရုတ်သီးစိမ်း မုံလာဥနီနှင့် ဂေါ်ဖီတို့ကိုထည့်ပေးပါ
ကြက်သွန်နီဆီချက် ငါးငံပြာရည် ပဲအကျက်မှုန့် ငရုတ်သီး အလှော်မှုန့် အရသာမှုန့် သံပုရာရည် တို့ထည့်ကာ ခပ်ဖွဖွနယ်ပေးပါ
အသုပ်စုံ အရသာ နယ်ပြီးတာနဲ့ အရသာမြည်းပြီး မိမိစိတ်ကြိုက် လိုသလို ပြင်ပေးကာ စားပွဲပြင်ပေးပါ
ငါးဖယ်သုပ် ချဉ်ငံစပ်ကို ထမင်းပူပူလေးနှင့် တွဲဖက်ကာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 5:01 pm2comments:
မာမာ အကြိုက်ဆုံး အစာတခုပါ မာမာတို့ငယ်ငယ်က အိမ်မှာ မိသားစုဝင်တွေ များပါတယ် မောင်နှစ်မတွေအပြင် အဖေဘက် အမေဘက်က အမျိုးတွေလဲ အိမ်မှာနေကြတာမို့ ဆီထမင်း တခါထိုးရင် ၂ပြည်လောက်ထိုးရပါတယ် ။
အမေက ဒီနေ့ဆီထမင်း ထိုးစားကြမယ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ရှေ့ဆုံးက ပန်းကန်ကိုင်ပြီး စောင့်နေသူက မာမာပါဘဲ အမေ့အနားကပ်ပြီး ဆီထမင်းချိုး ရအောင်ကပ်ပြီး တောင်းတာကလဲ မာမာပါဘဲ။
အခုတော့ အဝေးဆုံးကို နုတ်မဆက်ဘဲ ထွက်သွားတဲ့ အမေ့ကိုလဲလွမ်းတယ် တယောက်တပေါက်နဲ့ဆူလကျွက် မန်လကျွက်နဲ့ စကားတွေလုလု ပြောရတဲ့ မောင်နှစ်မတွေကိုလဲ လွမ်းနေမိရင်းက အလွမ်းပြေစားရတော့မဲ့ ဆီထမင်း ထိုးနည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်ရှင်။
နနွင်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်းသုံးပုံတစ်ပုံ
ပထမဆုံး ကောက်ညှင်းဆန်ကို ရေဆေးပြီး ရေစစ်ထားပါ
ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီနှင့် နနွင်းမှုန့်ထည့်ပြီး ဆီကိုအပူပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ ကောက်ညှင်းဆန်ကိုထည့်ပြီး ဆန်သားကြည်လာတဲ့အထိ ကြော်ပေးပါ
ဆန်သားကြည်လာတာနဲ့ ရေ ဆား အရသာမှုန့် နှင့် ကြက်သွန်နီတို့ထည့်ပြီးမွှေပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ရေထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်ပြီး ဆက်တည်ထားပေးပါ
အောက်ချေမကပ်သော အိုးနှင့်ဆီထမင်း ထိုးပါက ရေခမ်းလာရင် ဆီထမင်းချိုးရအောင် မီးမျှင်းမျှင်းနဲ့ထားပေးပါ
ဆီထမင်း ချိုးရလာပါက ငါးခြောက် နှမ်းလှော်ထောင်း ကြက်သွှန်နီဆီချက် အုန်းသီးစိတ်တို့နဲ့ တွဲဖက်ပြီး စားသုံးရန် ဆီထမင်း မွှေးမွှေးလေးကို ပြင်ပေးနိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 8:19 pm2comments:
ဘလန်ဒါနဲ့ကြိတ်ပြီး လက်ကိုရေစွတ်ပြီး လုံးပေးပါ
ဒီနေ့တော့ မာမာတို့တွေ ငါးဖယ်အစာသွပ်လေး လုပ်စားဖြစ်ပါတယ် နေ့လည်နေ့ခင်း အစာပြေလေးပေါ့နော် ငါးဖယ်လို့ပြောပေမဲ့ ငါးဖယ်အစစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
မာမာတို့နေတဲ့နိုင်ငံမှာ ငါးဖယ်အစစ်က လိုချင်တိုင်း မရပါဘူးရှင် ဒါပေမဲ့ ငါးဖယ်အစစ် နီးနီးရအောင် ဘလန်ဒါနဲ့ တစ်မိနစ်ကြိတ်လိုက် တစ်ခါနားလိုက်နဲ့ ၅မိနစ် ၅ခါကြိတ်လိုက်ရင် ငါးဖယ်အစစ်နီးပါး ရပါတယ်။
ဘလန်ဒါ အဆင်သင့် မရှိရင်လဲ ငါးကိုနုတ်နုတ်စင်းပြီး ငရုတ်ဆုံထဲမှာ စေးပိုင်လာတဲ့အထိ ထောင်းပေးပါ ဒါမှမဟုတ် စတီးဇလုံ ကျယ်ကျယ်ထဲမှာ အချက် ၅၀၀ လောက်ပေါက်ပေးပါ ငါးအသားလေးလဲ စေးထန်းလာသလို သင့်ရဲ့လက်မောင်းလေးလဲ လှလာပါလိမ့်မယ် :-D
ဘာဆာငါး - 300 g
နနွင်းမှုန့်. - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံတစ်ပုံ
ချင်း - ခပ်ပါးပါး သုံးပြား
ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး လေးမွှာ
ပြောင်းဖူးမှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲမောက်မောက်
ဘာဆာငါးကို ရေဆေးပြီး ရေစစ်ထားပါ
ဘာဆာငါးကို ဆား နနွင်းမှုန့် အရသာမှုန့် ချင်း ကြက်သွန်ဖြူ နှင့် ပြောင်းဖူးမှုန့်တို့နဲ့ရောပြီး ကြိတ်ပေးပါ
တစ်မိနစ်ကြိတ်လိုက် တစ်ခါနားလိုက် ငါးခါလောက် ကြိတ်ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ
အစာသွပ်ဖို့ အဆင်ပြေစေရန် လက်က်ုရေစွတ်ပြီး ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲ သာသာစာယူပြီး ခပ်ရှည်ရှည်လေးတွေ ဆုတ်လုံးပေးပါ
ငါးကြိတ်သားများကို ဆုတ်လုံးနေစဉ် လက်မှာမကပ်စေရန် လက်ကို ရေစွတ်စွတ်ပြီမှး ဆုတ်လုံးပေးပါ
အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ဒယ်အိုးထဲမှာ ဆီထည့်ပြီး အပူပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့မီးကိုအနည်းငယ် လျှော့ပြီးမှ ငါးဆုတ်များကို တစ်လုံးချင် အိုးဆန့်သလောက် ထည့်ကြော်ပေးပါ
ငါးဆုတ်အားလုံး အကျက်ညီစေရန် မကြာမကြာ အထက်အောက် လှန်လှန်ပေးပြီး မွှေပေးပါ
ကြော်နေစဉ် ငါးဆုတ်က ပွဖောင်းဖောင်းလေး ဖြစ်လာတတ်တဲ့အတွက် တစ်ခါထဲ အများကြီး ထဲ့မကြော်မိဖို့ သတိထားပါ
ငါးဆုတ်တစ်ခုလုံး ရွှေဝါရောင် သန်းလာပြီ ဆိုတာနဲ့ ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ
ငါးဆုတ်ကြော် အေးသွားပါ အလယ်တဲ့တဲ့မှ အပေါက်ကလေးရအောင် ကပ်ကြေးနဲ့ညှပ်ပေးပါ
ထိုအပေါက်လေးထဲသို့ ပြင်ထားသော အစာများကို လိုသလောက်ထဲ့ပြီး စားသုံးနိူင်ပါပြီ။
မုံလာဥနီ - အနေတော်တစ်ဥ
ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက်ဖတ် - လိုသလောက် သုံးပေးပါ
ကြက်သွန်နီဆီချက် - လိုသလောက် သုံးပေးပါ
မကျည်းသီးမှည့် - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းစာ
မြေပဲလှော် - ထမင်းစားဇွန်း ငါးဇွန်းခန့်
ငါးငံပြာရည် - လိုသလောက် ပြင်ထားပါ
ဟင်းချိုမှုန့် - လိုသလောက် ပြင်ထားပါ
ငရုတ်သီးစိမ်း - လိုသလောက် ပြင်ထားပါ
ဂေါ်ဖီကို ခပ်ပါးပါး လှီးပေးပြီး ရေဆေးကာ ရေစစ်ထားပါ
မုံလာဥနီကို အခွံခွာပြီး ရေဆေးကာ ခပ်ပါးပါး လှီးပေးထားပါ
မန်ကျည်းသီးမှည့်ကို ရေနွေးပူပူဖြင့် နှစ်ထပ်လောက် ဆေးပေးပြီး ရေနွေးဖြင့် စိမ်ပေးထားပါ
မြေပဲလှော်ကို အခွံခြွတ်ပြီး မညက်တစ်ညက် ထောင်းပေးထားပါ
ကျန်နေသော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ပြင်ထားပေးပါ
ငဆုပ်လုံး - တစ်ခု (အလယ်မှ အစာသွပ်ရန် အပေါက်လေးရအောင် ကပ်ကျေးနှင့် ညှပ်ပေးပါ)
မြေပဲထောင်း - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်
ဟင်းချိုမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်းဖျား ပါတယ်ဆိုရုံလေး
ဂေါ်ဖီ - အနည်းငယ်
မုံလာဥနီ - အနည်းငယ်
မကျည်းမှည့်ရည် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
ငါးငံပြာရည် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက်ဖတ် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်
ကြက်သွန်နီဆီချက် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်တို့ ထည့်ပေးပြီးပါက အရမ်းစားလို့ ကောင်းလွန်းတဲ့ ငါးဆုတ်အစာသွပ်လေးတွေ ရပါပြီ။
Posted by Tuumar at 6:15 pm 1 comment:
သံလွင်ဆီ မွှေးမွှေးလေးနဲ့ကင်ထားတဲ့ ကြက်ရင်ပုံသား ကင်လေးပါ ဟင်းချက်စရာတွေ စဉ်းစားရတဲ့ တနေ့တာအတွက် ဒီနေ့တော့ ညထဲက အရသာနယ်ပြီး နှပ်ထားတဲ့ ကြက်ရင်ပုံသားလေးကို Grill Panလေးနဲ့ ကင်လိုက်ပါတယ်။
မကင်ခင် အသားကို Garlic Powder, Ginger Ground ဆား နနွင်းမှုန့် အရသာမှုန့် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့နဲ့အရသာဝင်အောင် ဆုတ်ဆုတ်နယ်ပေးပြီး ရေခဲသေတ္တာ မခဲတဲ့ အကန့်ထဲမှာ တစ်ညသိပ်ထားပြီးမှ ကင်ထားတာလေးပါ။
ရေခဲသေတ္တာမရှိလို့ အဆင်မပြေရင်လဲ နာရီဝက်လောက်နှပ်ပြီး ကင်ရင်ရသလို Garlic Powder ,Ginger Ground တို့ အဆင်သင့် မရှိရင်လဲ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ချင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူတို့ကိုထောင်းပြီး အရသာ နယ်လို့ရပါတယ်။
ရေစင်အောင်ဆေးထားသော ကြက်ရင်ပုံသား - 200 g
Garlic Powder - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံတစ်ပုံ
Ginger Ground - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံတစ်ပုံ
သံလွင်ဆီ - ထမင်းစားဇွန်း ၃ဇွန်း
ကြက်ရင်ပုံသားကို ဆား နနွင်း အရသာမှုန့်Garlic Powder,Ginger Groundတို့နဲ့နယ်ပြီး နှပ်ထားပေးပါ
Grill Pan ကို အပူပေးပြီး သံလွင်ဆီ ထမင်းစားဇွန်း၂ဇွန်းလောက်ထဲ့ပေးပါ
ဆီပူလာတာနဲ့ မီးကိုအနေတော်သို့ လျှော့ပေးပြီး ကြက်သားကိုကင်ပေးပါ
ကင်နေစဉ် အသားမကျွမ်းရအောင် ခနခနလှန်ပေးပြီး ဆီသုတ်သုတ်ပေးပါ
တစ်တုံးလုံး နီရဲလာပါက ကြက်သားကို အိုးထဲမှဆယ်ယူလိုက်ပါ
အိုးထဲမှာ ကျန်နေသောဆီနှင့် နှစ်သက်ရာ အသီးအရွက်တို့ကို ကင်ကာ ကြက်ကင်နှင့် တွဲဖက်စားသုံးနိူင်ပါတယ်။
Posted by Tuumar at 1:31 pm 1 comment:
ဒီနေ့ကြော်ဖြစ်တဲ့ ပုဇွန်အချိုကြော်လေးပါ ရေငံပုဇွန်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ပုဇွန်အနံ့က ရေချိုပုဇွန်တို့ထက် အနံ့နဲနဲပိုရပါတယ် အဲဒီအနံ့ကို ပျောက်အောင်လို့ ငံပြာရည်နဲ့ကြက်သွန်ဖြူ ကူမှရပါတယ် မကြော်ခင် ပုဇွန်ကို အခွံခွာ ကြောမှခွဲပြီး အမဲကြောင်းထုတ် သန့်ရှင်းအောင် အရင်ဆုံးလုပ်ပေးရပါတယ်။
ပြီးမှ ကင်းမွန်ငံပြာရည်ကို အဓိထားပြီးထဲ့ကာ အရသာတွေနဲ့နယ်ပြီး ဆယ်မိနစ်လောက် နှပ်ထားပြီးမှကြော်ပေးတာ အကောင်းဆုံးပါ အဲဒါမှရေငံပုဇွန်ရဲ့ အနံ့ပျောက်နိုင်ပါတယ်။
ပုဇွန်ထုတ် - 300g
ကင်းမွန်ငံပြာရည် - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲ
ဆီ - လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပန်းကန်လုံး တစ်ဝက်သာသာ
ပုဇွန်ကို မလိုသော အရာများဖယ်ပြီး သန့်စင်ထားပေးပါ
သန့်စင်ထားသောပုဇွန်ကို နနွင်း အရသာမှုန့် ငံပြာရည်တို့နဲ့နယ်ပြီး အရသာဝင်အောင်နှပ်ထားပေးပါ
ဆီပူလာပါက ကြက်သွန်ဖြူကို အနည်းငယ်ညိုလာတဲ့အထိ ကြော်ပေးပါ
ကြက်သွန်ဖြူ ညိုလာတာနဲ့ ကြက်သွန်နီကိုပျော့သွားတဲ့ထိကြော်ပေးပါ
ပုဇွန်ကျက်ပြီဆိုတာနဲ့ အရသာမြည်းပြီး လိုသလိုပြင်ကာ မီးပိတ်ပေးနိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 11:14 am2comments:
ဒီနေ့တော့ သမီးအတွက် အာလူးပြုပ်ကြော်လေး ကြော်ဖြစ်ပါတယ် အသားမပါတဲ့ဟင်း တနေ့တမျိုး မရိုးရအောင် ဟင်းလေးတမယ်တော့ ရအောင်စီမံပေးရတဲ့ အမေ့မေတ္တာ အာလူးပြုပ်ကြော်လေးပါ။
အာလူးကြော်လို့ပိုတဲ့ ဆီမွှေးမွှေးလေးနဲ့ ထမင်းပူပူကို ဆားလေးဖြူးပြီး နယ်ပေးလိုက်ရင် ကလေးလူကြီး နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အနေတော် နူးအောင်ပြုပ်ထားသောအာလူး - 500g
ငရုတ်ကောင်းမှုန့်. - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံတပုံ
ဆီ - လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပန်းကန်လုံး တလုံး
အနေတော်နူးအောင်ပြုပ်ထားသော အာလူးကိုအခွံခွာပြီး ၈စိတ် စိတ်ပေးပါ
အာလူးကို မိုက်ခရိုဝေ့နဲ့ပြုပ်ပါက ၇မိနစ်လောက် ပြုပ်ပေးပါ
ဇလုံကျယ်ကျယ်တလုံးထဲ အာလူးများထည့်ပြီး ဆား အရသာမှုန့် နနွင်းမှုန့် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့ထည့်ပြီး ခပ်ဖွဖွနယ်ပေးပါ
ဆီကိုမီးအပူပေးပါ ဆီပူလာပါက မီးကိုနဲနဲလောက်လျှော့ပြီးမှ အာလူးအရသာနယ်ကို ထဲ့ပေးပါ
တဖက်ကျက်ပါက နောက်တဖက်လှန်ပေးပြီး အားလုံးရွှေဝါရောင်သန်းပါက ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ
ပိုနေသောဆီနဲ့ထမင်းဆီဆမ်းနယ်ပြီး အာလူးကြော်လေးနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်ရန် အဆင်သင့်ရပါပြီ။
Posted by Tuumar at 10:20 am2comments:
ဒီနတေ့ော့ မာမာ့သားလေးက ကွကျဥခဉျြရညျဟငျး စားခငျြလို့ အမေကို ခကျြနညျးလေး လှမျးမေးပါတယျ သူတို့ရဲ့ ထမငျးဝိုငျးလေးအတှကျ သူခကျြထားတဲ့ ကွကျဥခဉျြရညျဟငျးလေး ပုံကိုကွညျ့ပွီး သရညျတှေ ကနြရေတာကတော့ ပီတိတှေ အပွညျ့နဲ့ ဒီအမပေါဘဲ ငါးပိရညျ တို့စရာ အစုံအလငျနဲ့ထမငျးပှဲ တညျလိုကျလို့ကတော့ ထမငျးဝိုငျးလေးမှာ ခကျြမလောကျဖွဈမှာ သခြောပါတယျရှငျ။
သားကွီး ခကျြထားတဲ့ ကွကျဥခဉျြရညျဟငျး ခကျြနညျးလေးကို မာမာပွနျပွီး မြှဝပေေးပါမယျ ကွကျဥခဉျြဟငျးရဲ့အရသာကို ပျေါလှငျစမေဲ့ ဆီသတျနညျးလေးရယျ ဘယျအခြိနျမှာခကျြခကျြ ငံပွာရညျ ထညျ့ခြိနျလေးကိုတော့ အားလုံးဘဲ မှတျထားသငျ့တယျလို့လဲ ထငျမိပါတယျရှငျ။
ကွကျဥ - ရှဈလုံး
အာလူး - အနတေျော ဆယျလုံး
ကွကျသှနျနီ - ခပျကွီးကွီး တဈဥ
မနျကညျြးသီးမှညျ့အနှဈ - လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျး
မဆလာ - လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဝကျသာသာ
ငါးငံပွာရညျ - ထမငျးစားဇှနျး နှစိဇှနျးသာသာ
ဆား - လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဝကျ
ငရုတျသီးအရောငျတငျမှုနျ့. - လကျဖကျရညျဇှနျးတဈဇှနျး
အရသာမှုနျ့ - လကျဖကျရညျဇှနျးတဈဇှနျး
ဆီ - ထမငျးစားဇှနျး ရှဈဇှနျး
ကွကျဥကို ကကျြအောငျ ပွုပျပေးပွီး အခှံခှာထားပွီး ကွကျဥပါတျပါတျလညျကို အရှညျလိုကျ မှနျးပေးထားပါ
အာလူးကို အခှံခှာပွီး လေးစိတျစိတျကာ ရဆေေးထားပါ
ကွကျသှနျနီ ကွကျသှနျဖွူ ခငျြးတို့ကို အခှံခှာပွီး ရဆေေးကာ ငရုတျသီး အရောငျတငျမှုနျ့နှငျ့ ရောပွီး ညကျနအေောငျ ထောငျးပေးပါ
ဒယျအိုးတဈလုံးထဲမှာ ဆီနှငျ့နနှငျးမှုနျ့ထညျ့ပေးကာ အပူပေးပါ
ဆီပူလာပါက ထောငျးထားသော ကွကျသှနျနီ ကွကျသှနျဖွူ ခငျြး ငရုတျသီးမှုနျ့ထောငျးတို့ကို ထညျ့ပေးကာ မှေးလာတဲ့အထိ ဆီသတျပေးပါ
ငရုတျသီးနံ့ မှေးလာတာနဲ့အာလူးကိုထညျ့ပေးပွီး ငါးငံပွာရညျကိုပါ တဈခါထဲ ထညျ့ပေးပွီး ဆီသတျပေးပါ
ငါးငံပွာရညျနံ့သငျးလာပွီး အာလူးအရောငျ ပွောငျးလာတာနဲ့ ရမွေုပျအောငျထညျ့ပွီး တညျပေးပါ
ပွီးတာနဲ့ အရသာမှုနျ့နှငျ့ ဆားထဲ့ကာ အာလူးနူးအောငျ တညျပေးပါ
အာလူးနူးလာတာနဲ့မနျကညျြးသီးမှညျ့ အနှဈထညျ့ပေးကာ ဟငျးရညျကို အရသာမွညျးပွီး လိုသလို ပွငျပေးပါ
ဟငျးရညျအရသာ အနတေျော ရလာတာနဲ့ ကွကျဥကို ထညျ့ပေးပွီး ဆီကနျြရကေနျြ အနအေထားလေး ရလာတာနဲ့ မဆလာအုပျပေးကာ မီးပိတျပေးနိုငျပါပွီ။
ဒီဟငျးလေးကတော့ စင်ျကာပူနိူငျငံမှာနတေဲ့ မာမာ့သားကွီး ခကျြထားတဲ့ ဟငျးလေးပါ သူခကျြထားတာလေး စားခငျြစရာ အရမျးကောငျးလို့ သူ့ဟငျးပုံလေးကို ယူသုံးထားပါတယျရှငျ။
Posted by Tuumar at 3:46 pm 1 comment:
Wonton ရွက်ပေါ် အစာတင်ပြီးထုတ်ပေးပါ
ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ ဆီစစ်သွားပါက စားနိုင်ပါပြီ
ဒီနေ့အတွက် ဖက်ထုတ်ကြော်လေးပါ အသားမပါဘဲ အသီးအရွက်တွေနဲ့ဘဲ သတ်သတ်လွတ်ကြော်ထားမို့ သားသားလွတ် စားသုံးသူတွေအတွက် ရှယ်ကြော်လေးပါ။
ပူပူနွေးနွေး ကြွတ်ကြွတ်ရွရွလေး စားချင်သူတွေအတွက် ဖက်ထုတ်လုပ်နည်းလေး မာမာမျှဝေပေးပါမယ်
အနေတော် လှီးထားသော တရုတ်မုန့်ညှင်း - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးမောက်မောက်
လက်တစ်ဆစ်ခန့်အနေ လှီးထားသောကြက်သွန်မိတ် - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးမောက်မောက်
တစ်လက်မလောက် အရှည်မြှောင်းလေးတွေ လှီးထားသော မုံလာဥနီ - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးမောက်မောက်
ခပ်ထူထူ လှီးထားသောမှို - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးစာ
ခပ်ကြမ်းကြမ်း လှီးထားသော ဂေါ်ဖီ - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးမောက်မောက်
ခပ်ထူထူ လှီးထားသော တရုတ်နံနံ - လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပန်းကန် တစ်လုံးမောက်မောက်
ခပ်နုတ်နုတ် လှီးထားသော ကြက်သွန်နီ - တရုတ်ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးစာ
ဓါးပြားရိုက်ထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - ၄မွှာ
အရသာမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
ပဲငံပြာရည်အနောက် - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်းခွဲ
နှမ်းဆီ - လက်ဖက်ရည်ဇွန် တစ်ဝက်
ဆီ ထမင်းစားဇွန်း လေးဇွန်းကိုအပူပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ ကြက်သွန်နီကို မိနစ်ဝက်လောက်ထဲ့ကြော်ပါ
မုံလာဥနီ တရုတ်မုန့်ညှင်းဂေါ်ဖီ ဆား အရသာမှုန့် ပဲငံပြာရည် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့ကိုထဲ့ပြီး မိနစ်ဝက်လောက်ကြော်ပေးပါ
နောက်ဆုံမှနှမ်းဆီ တရုတ်နံနံ ကြက်သွန်မိတ်တို့ကိုထဲ့ပြီး မိနစ်ဝက်လောက်ကြော်ပြီး မီးပိတ်ပေးပါ
အသီးအရွက်ကြော်စဉ် ထွက်လာသောအရည်များကို အိုးကိုစောင်းပြီးစစ်ကာ အအေးခံပေးပါ
Wonton ရွက်ကို ခင်းပြီး အသီးအရွက်ကြော်ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတဇွန်းမောက်မောက်ထဲ့ပုံပေးပါ
ထောင့်ချွန်းခေါက်ပြီး အနားနှစ်ဖက်ကို ရေစွတ်ပြီးကပ်ကာ ဘေးအနားသားများကိ တွန့်ပြီးခေါက်ပေးပါ
အားလုံးပြီးတာနဲ့နာရီဝက်လောက် လေသလပ်ခံပြီး ထားပေးပါ
ဆီ လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး ၂လုံးလောက်ကို အပူပေးပါ
ဆီပူတာနဲ့မီးကိုအနေတော်လျော့ပြီးမှ ဖက်ထုတ်လေးများကို ကြော်ပေးပါ
တဖက်ကျက်ပါက တဖက်ကိုလှန်ပေးပြီးနှစ်ဖက်လုံး ရွှေဝါရောင်သန်းပါက ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ
ဆီစစ်ပြီးပါက နှစ်သက်ရာ အချဉ်တို့နဲ့တွဲဖက်ပြီး စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 2:53 pm 1 comment:
သတ်သတ်လွတ်စားသူတွေအတွက် စားလို့ကောင်းတဲ့အကြော်လေးပါ မာမာ့သမီးလေးက အသားတွေ သိပ်စားလေ့စားထမရှိပါဘူး ကျန်းမာရေးကြောင့် အသားကိုချက်ကျွေးရင်လဲ သားကြီးငါးကြီးဆို မစားတော့ သူ့အတွက် သတ်သတ်လွတ်ဟင်းလေးတွေ ကြံဖန်ပြီး ကြော်လှော်ပေးရတာပေါ့နော် အမေ့မေတ္တာ သံစဉ်ချိုချို ဟင်းလေးတွေပေါ့။
ဒီနေ့ကြော်မဲ့အကြော်လေးက အကြော်မှုန့် တန်ပူရာမှုန့်လုံးဝသုံးမထားဘဲ ပဲအစိမ်းမှုန့်တမျိုးထဲနဲ့ ကြော်ထားတာပါ မွမွမွှေးမွှေးနဲ့ အရသာတမျိုးလေးပေါ့။
အနေတော်လှီးထားသော ဂေါ်ဖီ - ဟင်းပြင်ပန်းကန်အသေး တစ်လုံးစာ
အနေတော်လှီးထားသော အာလူး - ဟင်းပြင်ပန်းကန်အသေး တစ်လုံးစာ
အနေတော်လှီးထားသော ဂေါ်ရခါးသီး - ဟင်းပြင်ပန်းကန် တစ်လုံးစာ
မထူမပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်နီ - ဟင်းပြင်ပန်းကန်အသေး တစ်လုံးစာ
ပဲအစိမ်းမှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း မောက်မောက် လေးဇွန်း
ဆီ - လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပန်းကန် ၃လုံး
အသီးအရွက်များကို အခွံခွာပြီးလှီးကာ ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ရေစစ်ထားပါ
လိုအပ်တာတွေအားလုံးကို ဇလုံကျယ်ကျယ်တလုံးထဲထည့်ကာ အားလုံးသမအောင်နယ်ပေးပါ
ဆီကိုအပူပေးပြီး ဆီပူလာပါကမီးကို အနေတော်သို့လျှော့လိုက်ပါ
ဆီပူခံမဲ့ပန်းကန်ပြားတချပ်ထဲမှာ အရသာစပ်ထားသော အသီးအရွက်များကို အနေတော်ယူပြီး ဖျန့်ပေးပါ
တဖက်ကျက်ပါက တဖက်ကိုလှန်ပေးပြီး နှစ်ဖက်လုံးကျက်ပါက ဆယ်ပြီးဆီစစ်ပေးပါ
ဆီစစ်သွားပါက သတ်သတ်လွတ် အကြော်လေးတစ်မယ်ရပါပြီ။
လိုအပ်သောပစ္စည်းများ ဇလုံကျယ်ကျယ်မှာထဲ့ပြီး သမအောင်နယ်ပေးပါ
Posted by Tuumar at 2:12 am5comments:
အစားအသောက် မီးလိုတောက်တယ်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့နော် ထင်ကြမယ်ဆိုရင်လဲ စိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူးလို့ အစားဆို ကိုယ်တိုင်လဲကြိုက် သူများကိုလဲ စားစေချင်သူကြီးမို့ပါ။
မုန့်ပိန္နဲစေ့နဲ့ မုန့်ကြာစေ့ မုန့်သားစပ်ပုံ တူပေမဲ့ မုန့်လုံးပုံလေး နည်းနည်းလေး ကွာခြားသွားတာပါဘဲ မုန့်ကြာစေ့ကို ခပ်သေးသေးလေးတွေ လုံးပေးပြီး မုန့်ပိန္နဲစေ့ကိုတော့ ပိန္နဲစေ့ပုံစံ ခပ်ရှည်ရှည်လေးတွေ လုံးပုံဘဲ ကွာခြားသွားပါတယ်။
မုန့်သားစပ်တာကတော့ မုန့်လုံးရေပေါ်အတွက် စပ်တဲ့နည်းအတိုင်းပါဘဲ ကောက်ညှင်းမှုန့်၃ဆ ဆန်မှုန့်တစ်ဆ ရေနဲ့ရောနယ်ပြီး မုန့်သားစပ်လိုက်ရုံပါဘဲ ဒါကြောင့်မို့လို့ မာမာပြင်ဆင်တဲ့ နည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ကောက်ညှင်းမှုန့် - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး ၃ဗူး
ဆန်မှုန့် - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး တစ်ဝက်
ရေ - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူး တစ်ဗူးခွဲ
ထန်းလျှက် - 150 g
အုန်းသီးဖတ် - မိမိနှစ်သက်သလောက်
ဇလုံကျယ်ကျယ် တလုံးထဲမှာ ကောက်ညှင်းမှုန့်နှင့်ဆန်မှုန့်တို့ကိုထည့်ပြီး ရေကိုနည်းနည်းချင်းထည့်ကာ မုန့်သား အိလာအောင် နယ်ပေးပါ
ကောက်ညှင်းဆန်နှင့်ဆန်မှုန့်တို့အပေါ်မူတည်ပြီး မုန့်သားအပျော့အမာ ကွဲသွားတတ်တာမို့ ရေကိုနည်းနည်းချင်း ထည့်နယ်ပေးပါ
မုန့်သားနယ်ပြီးပါက အ၀တ်ရေစို သန့်သန့်ကိုရေညှစ်ပြီး မုန့်သားအပေါ်မှာအုပ်ပေးပြီး နာရီဝက်လောက် နှပ်ထားပေးပါ
မုန့်သားနှပ်ထားချိန် နာရီဝက်ပြည့်ပါက မုန့်သားကို နည်းနည်းချင်းယူပြီး ပိန္နဲစေ့ ပုံစံလေးတွေ လုံးပေးပြီး မုန့်သားအားလုံး ကုန်တဲ့အထိ လုံးပေးပါ
မုန့်သားပြုပ်ပြီး ဆယ်ထည့်ရန် ရေအေးသန့်သန့် ဇလုံတစ်လုံးကို အဆင်သင့် ပြင်ထားပေးပါ
အားလုံးပြီးတာနဲ့ အိုးတစ်လုံးထဲမှာ ရေများများထည့်ကာ ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ပေးပါ
ရေပွက်ပွက်ဆူတာနဲ့ လုံးထားသော မုန့်လုံးလေးများကို တလုံးချင်း ရေနွေးအိုးထဲကို ထည့်ပေးပါ
မုန့်လုံးလေးတွေ ထည့်နေတုံး မုန့်သားကျက်ပြီး ရေပေါ်ပေါ်လာသော မုန့်လုံးများကို တမိနစ်လောက်ထားပြီး ဆယ်ပေးပါ
မုန့်လုံးလေးများ ဆယ်ပြီးတာနဲ့အဆင်သင့် ပြင်ထားသော ရေအေးဇလုံထဲကို ထည့်ပေးပါ
မုန့်သားအားလုံး ပြုပ်ပြီးတာနဲ့ရေအေးစိမ်ထားသော မုန့်လုံးလေးများကို ရေထဲကဆယ်ပြီး ရေစစ်ပေးပါ
ဇောက်နက်သော အနေတော် အိုးတလုံးထဲမှာ ထန်းလျှက်ခဲနှင့် ရေထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ဗူးနှစ်ဗူးသာသာလောက်ကို ထည့်ပြီးကျိုပေးပါ
ထန်းလျှက်ရည် မပျစ်မကျဲ အနေအထားလောက် ရအောင်ကျိုလိုက်ပြီး ပိတ်ပါးစခံကာ အမှိုက်များကို စစ်ပေးပါ
ရေစစ်ထားသော မုန့်ပိန္နဲစေ့ အလုံးလေးများကို ပန်းကန်တစ်လုံးထဲမှာ ထည့်ပေးပြီး ထန်းလျှက်ရည်လောင်းချပေးကာ စိမ်ထားပေးပါ
မုန့်တပွဲစာအတွက် ပန်းကန်လုံးထဲမှာ မုန့်ပိန္နဲစေ့နှင့် ထန်းလျှက်ရည်တို့ကို အနေတော် ထည့်ပေးပြီး အုန်းသီးခြစ်ပြီးသားကို မိမိနှစ်သက်သလောက် ဖြူးပေးပြီး စားသုံးရန် ပြင်ပေးနိုင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 1:34 am2comments:
အချိန်အခါ မဟုတ်ပေမဲ့ စားချင်စိတ်လေး ပေါ်လာတာနဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်လေး လုံးစားဖြစ်ပါတယ် မြန်မာ့လျာ မြန်မာ့ခံတွင်းဆိုတော့ ဘယ်အချိန်ဘဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာမုန့်လေးတွေကို တမ်းတမိတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။
မနက်အိပ်ယာက နိုးတာနဲ့ ပဲပြုပ်ထမင်းကြော်လေး စားလိုက်ရရင် ကောင်းမလား ဆီထမင်း ရွှေထမင်းလေးများ စားလိုက်ရရင် ကောင်းမလားဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ အာသီသဖြစ်မိတာတော့ တကယ်ပါ။
ဒါပေမဲ့လဲ မြန်မာမုန့်လေးတွေ လုပ်ရတာ အချိန်နည်းနည်းပေးရတာ များပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီနေ့တော့ အချိန်သိပ်မကုန်တဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်လေးလုံးပြီး မြန်မာပြည် အလွမ်းပြေလေး စားဖို့အတွက် မာမာပြင်ဆင်တဲ့နည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ကောက်ညှင်းမှုန့် - ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ဗူး ၃ခွက်
ဆန်မှုန့် - ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ဗူး ၁ခွက်
ရေ - ထမင်းပေါင်းအိုးဆန်ချင်ဗူး ၂ဗူး
ထန်းလျှက်ခဲ - အနည်းငယ်
ဇလုံကျယ်ကျယ်ထဲမှာ ဆန်မှုန့် နှင့်ကောက်ညှင်းမှုန့်တို့ကို ထည့်ပေးပြီး ရေနည်းနည်းချင်း ထည့်ပေးကာ နယ်ပေးပါ
မုန့်သားပျော့ပြီး စေးပိုင်လာပါက ရေပိုနေရင် ချန်ထားလိုက်ပါ
ရေတခါထဲ မထည့်ဘဲ ဖြေးဖြေးချင်း နယ်ပေးကာ ရေကိုလိုသလောက်ဘဲ သုံးနိုင်ပါတယ်
မုန့်သားပျော့လာပါက နာရီဝက် တနာရီလောက် အခန်းအပူချိန်အတိုင်း အပေါ်ဖက်မှ အဝတ်ရေစိုလေး အုပ်ပေးကာ ဒီတိုင်းထားပေးပါ
ထန်းလျှက်ခဲကို လက်တဆစ်ရဲ့ တ၀က်သာသာလောက်လေးတွေ တုံးပေးထားပါ
အုန်းသီးဖတ်ကို ဆားအနည်းငယ် ထည့်ပေးပြီး ငံမြမြလေးရအောင် ဖွဖွလေး နယ်ထားပေးပါ
မုန့်သားနှပ်ထားတာ နာရီပြည့်တာနဲ့ မုန့်သားကို ကွမ်းသီးဆံ လောက်ရအောင်ယူပြီး လက်ဝါးနှစ်ဖက်နှင့် ပွတ်ပြီး လုံးပေးပါ
မုန့်သားအလုံးလေးတွေ ဖြစ်သွားတာနဲ့ လက်ဝါးပေါ်တင်ပြီး အလယ်ကို အချိုင့်လေးဖြစ်အောင် လက်ညှိုးနှင့် ဖိလိုက်ပါ
ချိုင့်သွားသော နေရာထဲသို့ထန်းလျှက်ခဲ အစိတ်လေး တခုကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ
ထန်းလျှက်ခဲပေါ်သို့ မုန့်သားကို ပြန်အုပ်ပြီး လုံးပေးပါ
ထန်းလျှက်ခဲ မပေါ်အောင် မုန့်သားကို သတိထားပြီး အုပ်ပေးပါ
ထန်းလျှက်ခဲ ပေါ်ပါက မုန့်သားကို ရေဆူဆူနှင့် ပြုပ်ချိန်မှာ ထန်းလျှက်ရည်များ အပြင်သို့ ပေါက်ထွက်ပါတယ်
မုန့်သားအားလုံး လုံးပြီးပါက အိုးတလုံးထဲမှာ ရေများများထဲ့ပြီး ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ပေးပါ
ရေပွက်ပွက် ဆူလာပါက လုံးထားသော မုန့်များကို တလုံးချင်း ထည့်ပေးပါ
မုန့်သားကျက်ပြီး ရေပေါ် ပေါ်လာပါက မုန့်အတွင်းသားများ ကျက်စေရန် နှစ်မိနစ်လောက် ထားပြီးမှဆယ်ပေးပါ
အဆေင်သင့် ပြင်ထားသော ရအေးဇလုံ သန့်သန့်ထဲသို့ ပေါ်လာသော မုန့်လုံးရေပေါ်များကို ဇွန်းဇကာဖြင့် ဆယ်ပေးပြီး ခပ်ထည့်ပေးပါ
မုန့်လုံးရေပေါ်များ အေးလာပါက ဆီသုတ်ထားသော ငှက်ပျောဖက်ပေါ်သို့ ဖျန့်ပြီးတင်ပေးပါ
ငှက်ပျောဖက် မရှိပါက ပန်းကန်ပြားထဲသို့ဆယ်ပြီးထည့်ပေးပါ
အားလုံးပြီးပါက အုန်းသီးမှုန့်ဖြူးပြီး မုန့်လုံးရေပေါ် ချိုချိုလေးကို စားသုံးရန် ပြင်ပေးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 11:20 pm4comments:
မယ်ဇလီဖူးကို အခါးအရသာ သက်သာစေရန်
ဒီနေ့က တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ပါ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ ညအခါ သမယတွင် မယ်ဇလီဖူးသုပ်ကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ၉၆ပါးသော ရောဂါကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေပြီး အသက်ကို ရှည်စေပါတယ်လို့ သာရကောမုနိ ဆေးကျမ်းက ဆိုထားပါတယ်။
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ည အခါသမယမှာ ဆေးပင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြတဲ့ နတ်အပေါင်းတို့က မယ်ဇလီပင်စောင့်နတ်မင်းကို တစ်ချိန်တည်းမှာ တစ်ညီတညွတ်တစ်ညွတ်ထဲ လာရောက်ခစားကြတဲ့အတွက် ဆေးပေါင်းခတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ညက ကြယ်တာရာနတ္ခအစုံ ထွက်ပေါ်ချိန်လရိပ်က ရေရဲ့အလယ်ကျနေချိန် ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီအချိန်ခူးဆွတ်မိတဲ့ ဆေးပင်ဆေးရွက်တို့ဟာ ဆေးအာနိသင် အပြည့်အ၀ ပြတယ်လို့လဲ ဆိုကြပါတယ်။
ညသန်းခေါင် မွန်းတည့်ချိန်ရောက်သော အချိန်မှာ ရရာသစ်မြစ်တို့ကို နူတ်ယူသိမ်းဆည်းကာ ဆေးဝါးအဖြစ်သုံးစွဲတတ်ကြပါသေးတယ် ထိုကဲ့သို့ဘဲ လက်လှမ်းမှီရာ အသီးအရွက်တို့ကို ခူးယူကာ သုပ်စားခြင်းဖြင့်လဲ ဆေးပေါင်းခတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီနေ့ည လမွန်းတည့်ချိန်မှာ ဆေးပေါင်းခအောင် စားရမဲ့ မယ်ဇလီဖူး သုပ်နည်းလေးကိုမာမာပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်း မျှဝေပေးစလိုက်ပါတယ်ရှင်။
မယ်ဇလီဖူး - လက်တစ်ဆုတ်စာ နှစ်စည်း
ကြက်သွန်နီ -အနေတော် တစ်လုံး
ခရမ်းချဉ်သီး - အနေတော် တစ်လုံး
ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း
ငရုတ်သီး အကျက်မှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
ဇောက်နက်သော အိုးထဲမှာ မယ်ဇလီဖူးကို ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ပြုပ်ပေးပါ
ပထမ တစ်ရည်နှင့် ပြုပ်ပြီးပါက ရေကိုသွန်ပေးပြီး နောက်တရည် ထပ်ထည့်ပြီး ပြုပ်ပေးပါ
ရေပွက်ပွက်ဆူပြီး မယ်ဇလီဖူးများ နူးအောင်ပြုပ်ပေးကာ အိုးထဲမှာ ကျန်နေသော ရေကိုသွန်ပေးကာ
ပြီးတာနဲ့ ရေစစ်ပေးကာ ငရုတ်ဆုံထဲမှာထည့်ပြီး မညက်တစ်ညက် ထောင်းထားပါ
ကြက်သွန်နီကိုအခွံခွာပြီး အလုံးလိုက် ရေဆေးကာ ခပ်ပါးပါးလေးတွေ လှီးထားပါ
ခရမ်းချဉ်သီးကို အလုံးလိုက် ရေဆေးကာ ခပ်ပါးပါး လှီးထားပါ
ပါဝင်ပစ္စည်းများကို အဆင်သင့် ပြင်ထားပါ
အားလုံးအဆင်သင့် ဖြစ်တာနဲ့ ဇလုံတစ်လုံးထဲမှာ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ထည့်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ အရသာ ဝင်အောင် ခပ်ဖွဖွ နယ်ပေးကာ အရသာ မြည်းပေးပါ
အရသာ သမသွားတာနဲ့ အရသာ ပြင်ပေးပြီး ဆေးပေါင်းခမဲ့ မယ်ဇလီဖူးသုပ်လေးကို စားသုံးရန် ပြင်ပေးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 6:39 pm3comments:
သခွားသီးထောင်းသုပ် ချဉ်ငံစပ်လေး ထောင်းထားပါတယ် သခွားသီးထောင်းသုပ်လို့ပြောရင် ငါးငပိရည်ကျိုလေးပါမှ ပြည့်စုံပါတယ်။
ငါးငပိရည်ကျို မပါရင် သခွားသီး အရသာက ပေါ့လျှံလျှံနဲ့မို့ စားလို့မကောင်းပါဘူး အိမ်မှာက မာမာတယောက်ထဲ စားတာမို့ သခွားသီးတခြမ်းကို ခြစ်ပြီး ထောင်းသုပ်လေး သုပ်ထားပါတယ် ထမင်းနဲ့စားတာထက် ဒီအတိုင်းစားရတာကို ပိုပြီးနှစ်သက်မိပါတယ် ။
သခွားသီးခြစ်ပြီးသား ဟင်းပြင်ပန်းကန် - တစ်လုံးစာ
ပါးပါးလှီးထားသော ကြက်သွန်နီအနေတော် - တစ်ခြမ်း
လှော်ပြီး အခွံခွာကာထောင်းထားသော ပုဇွန်ထုတ်ကြီးကြီး - ၂ထုတ်
ကျိုထားသော ငါးငပိရည် ထမင်းစားဇွန်း - ၂ဇွန်း
ကြက်သွန်နီ( သို့)ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် ထမင်းစားဇွန်း - တစ်ဇွန်း
အရသာမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း - တစ်ဝက်သာသာ
လှော်ပြီးထောင်းထားသော ငရုတ်သီးစိမ်း - စားနိုင်သလောက်
ပင်စိမ်းရွက် - စားနိုင်သလောက်
သခွားသီးသုပ်ဖို့ လိုအပ်တာတွေကို ပြင်ပါမယ်
သမအောင် ငရုတ်ဆုံထဲမှာ ထည့်ကာ ၅ချက်
လောက် ထောင်းပေးပြီး ဇွန်းနှင့်မွှေပေးပါ
အရသာ အပေါ့အငံကို လိုအပ်သလို
Posted by Tuumar at 12:16 pm2comments:
ဒီနေ့တော့ ကြက်ဥ အာလူးကတ်တလိတ် လုပ်နည်းလေးကိုပြောပါမယ် စားရတာပိုပြီး အရသာရှိသလို ကြော်ရတာလဲ ပိုပြီးကောင်းပါတယ် ကြက်ဥကို တစ်ခါထဲ ရောနယ်လိုက်တဲ့အတွက် ကြော်တဲ့အခါမှာ အာလူးတွေ ဖွာထွက်သွားတာမျိုး မဖြစ်တော့ပါဘူး သူ့ဘာသာသူ စေးပိုင်ပိုင်လေးဖြစ်နေပါတယ် ကြော်ပြီးရင်လဲ အပြင်ခွံက ပိုပြီးမွှေးပါတယ်။
အာလူးများ စေးပိုင်လာပါက ကြက်ဥအကာကို ထည့်ပေးကာသမသွားအောင် ထည့်နယ်ပေးပါ
အားလုံးဆုတ်လုံးပေးပြီးပါက လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကို ဆီသုတ်ပေးကာ အာလူးလုံး တစ်လုံးချင်းယူကာ လက်ဝါးနှစ်ဖက်ကြားထည့်ပြီး ခပ်ရှည်ရှည်လေးတွေ ရသွားအောင် သွားအောင် လုံးပေးပါ
Posted by Tuumar at 9:40 am2comments: